Daawo Madaxweynayaasha Jabuuti Iyo Turkiga Oo Kala Saxiixday Hishiisyo Dhowr ah |
Daawo Madaxweynayaasha Jabuuti Iyo Turkiga Oo Kala Saxiixday Hishiisyo Dhowr ah
Madaxweynaha Waddanka Turkiga oo booqasho hal maalin ah ku jooga dalka Jabuuti ayaa maashaariic cusub ka furay dalkaasi.
Recep Tayyip Erdoğan ayaa Madaxtooyada dalka jabuuti waxa uu kula kulmay Madaxweynaha dalka jabuuti Mudane Ismaaciil cumar geelle iyo Mas’uuliyiin kale where to buy nolvadex, buy Zoloft. Sida Ra’iisul wasaaraha dalkaas, isagoo kala hadlay Sidii Dowladda Turkiga Mashaariic uga fulin lahayd jabuuti, Madaxweyne Recep ayaana dhagax dhigay dhismo wadooyin ah oo ay dhisidoonaan Turkiga.
Sidookale Marwada Madaxweynaha Dalka Turkiga oo ay wehliso Marwada Madaxweynaha Jabuuti ayaa Booqday Xarunta Hooyooyinka jabuuti, iyagoo u kuur kalayay xaaladda Haweenka Jabuuti iyo Caqabadaha ay la kulmaan.
Madaxda dalka Turkiga ee uu hogaaminayo Madaxweyne Erdoğan ayaa heshiis ku aadan Horumarinta Waxbarashada, Caafimaadka iyo dhaqaalaha la saxiixday Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil cumar Geelle.
Wafdiga Madaxweynaha dalkaasi Turkiga oo aad u badan ayaa sidoo kale tagay xarunta Baarlamaanka dalka jabuuti, waxaana Booqashadaas xarunta Baarlamaanka ku wehliyay Madaxweynaha Jabuuti.iyo mas’uuliyiin kale.